टिपरले तीन जना बसेको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको निधन एक जना गभिर घाइते ! « Etajakhabar
टिपरले तीन जना बसेको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको निधन एक जना गभिर घाइते !
प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार १४:२८
मोरङका सवारी दुर्घटनामा २ जनाको निधन भएको छ । दुर्घटनामा २ जनाको निधन भएको हो । विराटनगरस्थित कोशी राजमार्गमा शनिबार बिहान भएको टिपर दुर्घटनामा २ जनाको निधन भएको छ । सो दुर्घटनामा एकजना ग,म्भीर घाईते भएका छन ।
बुढीगंगा गाँउपालिकाको वडानम्बर १ तथा विराटनगर प्रवेशद्वार नजिकैको कोशी राजमार्गमा टिपरले तीन जना बसेको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिएको हो । मोटरसाईलमा सवार २ जनाको निधन भएका् प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाईकल चालक सिराहाका २० बर्षिय हरेराम साह र सिरहाकै लहानका २१ बर्षिय मोहम्मद ओजिरको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरि सोहि मोटरसाईलमा सवार अर्का १९ बर्षिय युवा सप्तरी रुपनीका १९ बर्षिय धनराज यादव ग म्भीर घाईते भएका छन् । तीन जना सवार रहेका प्रदेश २–०१ प १६०८ नम्बरको मोटरसाईकललाई विराटनगरबाट इटहरीतर्फ जाँदै गरेको को १ ख ७३०९ नम्बरको टिपरले विराटनगर गेट नजिकैको सडकमा ठक्कर दिएको थियो ।
तीन जना सवार तीव्र गतिमा रहेको मोटरसाइकललाई ओभरटेक गर्ने क्रममा टिपरले ठक्कर दिएको थापाले बताए । मृ तक र घाइते तीनै जना विराटनगरको गोल्डेन पार्क कलेजमा ओभरसियर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् । टिपर र चालक मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–७ का ३५ वर्षीय शशीकुमार थन्दारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।